Halkee ayay marayaan wada-hadallada u dhexeeya naadiga Barcelona iyo difaaca Chelsea ee Azpilicueta? – Gool FM
Halkee ayay marayaan wada-hadallada u dhexeeya naadiga Barcelona iyo difaaca Chelsea ee Azpilicueta?
Ahmed Nur December 7, 2021
(London) 07 Dis 2021. Kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa lagu soo warramayaa inay wada-xaajood heer wacan maraya kula jirto kabtanka naadiga Chelsea ee Cesar Azpilicueta si ay xagaaga dambe qaab bilaash ah ugula wareegto.
Wargeyska El Nacional ayaa sheegay in wakiillo ka socda 32-sano jirkan ay wada-hadallo heer sare maraya kula jiraan wakiillo ka socda naadiga ka dhisan Catalonia iyagoo ku dhow inay isla meel dhigaan heshiis horudhac ah bisha January kaasoo uu xagaaga dambe ugu biiri doono Camp Nou.
Azpilicueta ayaa xagaagii 2012 ku biiray galbeedka London markaas oo uu kasoo hayaamay naadiga Faransiiska ka dhisan ee Marseille, waxaana qandaraaskiisa Stamford Bridge uga harsan wax ka yar toddobo bilood taasoo muujineysa qatarta ay Blues ugu jirto inay difaaceeda ku lumiso qaab bilaash ah wixii ka dambeeya June 2012.
Si kastaba ha ahaatee, xiddiga reer Spain ayaa Chelsea u saftay 444 kulan tartammada oo dhan isagoo kula guuleystay siddeed koob oo ay ku jiraan labo Premier League, labo Europa League iyo Champions League oo uu xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay kula guuleystay, maalmihiisa Ingiriiska ayaana haatan la tirinayaa.
RASMI: Isku aadka wareegga saddexaad ee tartanka FA Cup oo la sameeyay... (Man United oo la kulantay isku-aadka ugu kulul & Taariikhda la ciyaari doono wareeggan)
Lewandowski oo si adag uga jawaabay hadaladii Messi ee ku saabsanaa abaal-marinta Ballon d’Or